Inkomfa ye-15th yamazwe aphesheya ye-gvSIG-usuku 1
INkomfa ye-15 ye-gvSIG yamanye amazwe iqale ngo-Novemba ngo-6, kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo seGeodetic, iCartographic kunye neTopographic Engineering-ETSIGCT. Umsitho uvulwe ngabasemagunyeni kwiPolytechnic University yaseValencia, iGeneralitat Valenciana kunye noMlawuli Jikelele we-gvSIG Alvaro Association ...
GIS IGVSIG GvSIG OS
Geospatial - GIS, GvSIG, ezintsha
Ingqungquthela ye-GNUMXas ye-gvSIG yeHlabathi: «Uqoqosho kunye neMveliso»
Isikolo esiphakamileyo sobugcisa beGeodetic, iCartographic kunye neTopographic Engineering (iYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia, eSpain) iya kubamba, ngomnye unyaka, iNkomfa yaMazwe ngaMazwe ye-gvSIG , eza kubanjwa ukusukela nge-24 ukuya kwi-26 ka-Okthobha phantsi komxholo othi "Uqoqosho kunye neMveliso" . Ngexesha lenkomfa kuyakubakho iiseshoni ezahlukeneyo zenkcazo-ntetho (ulawulo lukamasipala, imeko zikaxakeka, ezolimo ...), kwaye kuyakubakho ...
Kumnandi ukwazi ukuba i-gvSIG ifumene ibhaso lamanye amazwe ngexesha le-Europa Challenge yangoku. Eli bhaso libonelela ngamathuba kwiiprojekthi ezizisa izinto ezintsha kunye nezisombululo ezizinzileyo kuluntu lwehlabathi. Ewe kunjalo, ukuba bongeza ixabiso elongeziweyo kwi-INSPIRE Initiative kwaye basebenzise itekhnoloji efumaneka ...
Izifundo ezintsha ze-gvSIG kwi-intanethi
Sibhengeza ukuqala kwenkqubo yobhaliso kwiikhosi ze-gvSIG zoQeqesho loQeqesho, kunye nokusikwa kwesibini kwe-2014, eyinxalenye yesibonelelo seNkqubo yokuQinisekiswa yoMbutho we-gvSIG. Kumsitho wokukhumbula iminyaka elishumi yeprojekthi ye-gvSIG, uninzi lwezifundo luthotyiwe, kwaye ikhosi yasimahla ikwabandakanyiwe ...
Oko kuchazwa yinguqulelo entsha ye-gvSIG 2.0
Ngolindelo olukhulu sibhengeza into ethe yaziswa ngumbutho we-gvSIG: ingxelo yokugqibela ye-gvSIG 2.0; Iprojekthi ebisebenza ngendlela ethe ngqo kuphuhliso lwe-1x kwaye kude kube ngoku isishiye sanelisekile kwi-1.12. Phakathi kwezinto ezinqabileyo, le nguqulo inokwakha izakhiwo ezintsha, kwi ...
I-GIS ye-3 version ephathekayo, phantse yonke into esuka kwi-USB
Inguqulelo yesithathu ye-GIS ephathekayo ibhengeziwe, isixhobo esithe sasijonga ngokutsha kwiminyaka emithathu edlulileyo, kanye xa inguqulelo yesi-2 yasungulwa ngoJulayi ka-2009. Ngendlela, ndikhumbula ukubhenela kuyo ngeentsuku zedemokhrasi eHonduras Usinyanzele ukuba sisebenze kumakhaya ethu, kwaye phantse ...
gvSIG Batoví, unikezelo lokuqala lwe-gvSIG yezeMfundo luthiwe thaca
Ukusetyenziswa kwamazwe aphesheya kunye nokuxhotyiswa okulandelwa sisiseko se-gvSIG sinomdla. Akunamava amaninzi afanayo, akuzange ngaphambili isoftware yasimahla ikhule ngoku, kwaye imeko yelizwekazi liphela ekwabelana ngolwimi olusemthethweni inomdla. Ukufikelela kwinqanaba leshishini sele kunesiqalo, ukufikelela kwinqanaba lokufunda ...
Namhlanje iindaba zifikile malunga nokudityaniswa kwemizamo phakathi kwe-i3Geo kunye ne-gvSIG, isihloko esibonakala kum njengesigqibo esibalulekileyo se-gvSIG Foundation, nangona ndiyazi ukuba ayisosiphumo esibonakalayo sawo wonke umsebenzi othatha iinyanga zokucwangcisa kwisicwangciso-qhinga samazwe aphesheya. Ezinye iisayithi ziya kuthetha ngayo kwaye siya kwazi okuninzi ...
Ixabiso leqhinga lolwazi lommandla
Kwisakhelo sokwaziswa kweMephu yeJografi yeziQithi zeCanary, iNkomfa yobuGcisa kwiXabiso leQhinga loLwazi lweNgingqi iya kubanjwa. I-axis esisiseko yezi iya kugxila kulwazi lwejografi, njengeendlela ezinengqiqo nezihambelanayo zolwazi lobume bomhlaba kunye nokuvela kwawo ...
Baphi abasebenzisi be-GvSIG
Kule mihla i-webinar kwi-gvSIG iya kunikwa ukuze ifunde ngakumbi malunga neprojekthi. Nangona injongo eyomeleleyo yale ntengiso ithetha isiPhuthukezi, njengoko yenziwa ngaphakathi kwesakhelo somsitho weMundoGEO, ubungakanani bayo buya kuqhubeka, ke sithatha ithuba lokuhlalutya amanye amanani ...
GvSIG, Internet kunye neBlogs
Ngenxa yezicelo ezifunyenwe kubasetyenziswanabafundi, iGeographica iququzelele ushicilelo lwesibini lweGIS kunye neJografi yoLwazi yezifundo ubuso ngobuso.Oku kubandakanya iiyure ezingama-40 zokujongana ubuso ngobuso, apho ukubaluleka namandla eBDG kwaziwa, kubalulekile Nawuphi na umsebenzi ofuna ukusebenza nezinto ezi ...
10 40 + iintetho zenkomfa SIG Mahala 2012
Imixholo engaphezulu kwama-40 enokwenzeka eya kuqhutywa kwiNkomfa yesiThandathu ye-SIG yasimahla eGirona ibhengeziwe. Mhlawumbi esinye seziganeko kwimeko yeSpanishi enefuthe elikhulu ekubonakaleni kwe-OpenSource ejolise kwiiNkqubo zoLwazi lweJografi. Njengesampulu, ndikushiyela iingoma ezili-10 ezi ...
Geographica ukuqala unyaka kunye nezifundo GIS entsha
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bendithetha nawe ngePilisi zeGIS zeGeografi, ndilandelela ngokwenziwa yile nkampani.Namhlanje ndifuna ukukuxelela malunga nolindelo lonyaka wama-2012 malunga noqeqesho olunikezelwayo kwingingqi ye-geospatial. 1. Ikhosi kwiArcGIS, gvSIG, QGIS kunye nezinye izisombululo zeGeomatics Le ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, GvSIG, qgis
Iplanethi evulekileyo, amaPhepha angama-77 ukutshintsha ingqondo
Ube ngunyaka obusebenza kakhulu kwiinkomfa ze-gvSIG, ebesinazo e-Itali, e-United Kingdom, e-France-kwisakhelo samazwe athetha isi-French-, i-Uruguay, i-Argentina kunye ne-Brazil-ye-Latin America- kwaye njengesiko, uhlelo lwe Iplanethi evulekileyo ehamba neenkomfa ze-gvSIG zamanye amazwe zamva nje. Kodwa ayi…
IsiCwangciso soLawulo oluNgxamisekileyo (GEMAS) khetha i-gvSIG
Sikwazisiwe malunga nokuphunyezwa kwezicelo ze-gvSIG kwiinkqubo ezijolise kulawulo lwexesha likaxakeka, ke siyisasaza sikholelwa ekubeni inokuba luncedo kwabaninzi. Iphondo laseMendoza kwiRiphabhlikhi yaseArgentina yindawo ebuthathaka ngenxa yemeko yendawo kwaye ichaphazeleka ngamaxesha athile zizinto ezahlukeneyo zendalo: ...
Iiphotography, GvSIG, UkuCwangciswa kweziThili
I-GGL yokusetyenziswa kolwimi ekhoyo kwi-gvSIG
I-gvSIG ipapashe nje ukuba ngenxa yehlobo likaGoogle leKhowudi kwiprojekthi ye-gvSIG, iplagi ye-gvSIG ye-GGL isandula ukukhutshwa. I-GGL lulwimi oluthile lwenkqubo yokwenza i-geoprocessing apho unokufumana khona ulwakhiwo oluqhelekileyo lolona lwimi luthandwayo (iilogo, iimeko ezithile, njl.) Kunye ...
Ngaphandle kweOpenOffice, iVuze, iWoopra, okanye ii-applet eziboniswe kwamanye amaphepha ewebhu, ibekwe kakuhle kakhulu kwiisistim ezihambisa iselfowuni, i-TV, i-GPS, ii-ATM, iinkqubo zeshishini kunye namaphepha amaninzi esihamba kuwo imihla ngemihla asebenza kwiJava. . Umzobo olandelayo ubonakalisa ukuba itekhnoloji yeJava ine-domain ephawuliweyo ye ...